Samsung 4G LTE, waa taleefan kale oo casri ah oo Android ka socda Verizon | Androidsis
Hore ayaan kaaga soo sheegnay Motorola Droid Bionic, casriga ah oo bixiya isku xirnaanta Shabakada Verizon 4G LTE, marka lagu daro in lagu qalabeeyo Nvidia Tegla 2 processor-laba-geesood ah. Maanta ayaa loo jeedaa in lagu baro adiga Samsung 4G LTE, taas oo aan naqaanay intii lagu guda jiray Waxaaad 2011 laga bilaabo La Vegas.
Xaaladdan oo kale, waa terminaal yeelan doona a 1GHz Hummingbird processor, oo ah hal xudun, taasina waxay la socon doontaa Android 2.2 Froyo. Sida shaashaddaada, waxaan wajaheynaa a Super AMOLED Plus 4,3 inji cabir ahaan Dhinaca kale, ka Samsung 4G LTE Waxay leedahay laba kamaradood oo isku dhafan, gadaal 8 megapixel iyo LED Flash, iyo hore 1,3 megapixel.
Waxaa laga yaabaa in astaamaha terminal-kan aysan wax badan naga dhaadhicin, sababtuna ma ahan inay xun yihiin, laakiin maxaa yeelay waxay ka liitaan taleefoonnada kale ee casriga ah ee leh taageerada 4G LTE shabakadaha la bixiyo maalmihii la soo dhaafay, sida kuwa kor ku xusan ee Droid Bionic ee Motorola, the HTC Thunderbolt iyo, in yar, the Kacaankii LG.
Waxa cad waa taas Shabakada Verizon 4G LTE ayaa ka mid ahaa halyeeyadii ugu waaweynaa ee CES 2011 iyo in ay noqon doonto inta lagu guda jiro sanadkan, iyada oo la tixgelinayo in inta lagu guda jiro dhacdada aan la soo bandhigin oo keliya taleefannada casriga ah ee sidoo kale aaladaha kale ee bixin doona taageerada tignoolajiyadan la soo bandhigay.
El Samsung 4G LTE Waxay bilaabi doontaa in laga ganacsado bartamaha sanadka Mareykanka iyo wadamada kale ee leh shabakadaha LTE.
viewed Halkan y Halkan
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung 4G LTE, oo ah taleefan kale oo casri ah oo Android ka socda Verizon
hello saaxiib su'aal ah nooca noocaas ah ayaa lagu isticmaali karaa halkan Ecuador ama maya
Google Goggles for Android waa la cusbooneysiiyay, hadda aad ayuu u dhakhso badan yahay oo lala yaabay